न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँटपछि , यहाँबाट हेर्नुहोस नतिजा।
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँटपछि, यहाँबाट हेर्नुहोस नतिजा।
न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निष्काशन गरेको आईपीओको नतिजा कहिले आउला भन्ने सबैको चासो रहेको छ। हाल सम्म आधिकारिक रुपमा बाँडफाँटको मिति तय भने गरिएको छैन। आइपियो बाँडफाँट भए पछी तपाइले तलको लिंक बाट आफुलाई परेको र नपरेको भनि नतिजा हेर्न सक्नु हुने छ।
कम्पनीले रु. २२ करोड ५० लाखको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । उक्त शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोवल आइएमई बैंक रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ।
न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा अन्तिम दिनसम्म २३ लाख ५७ हजार १६६ जनाको आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार यी आवेदकहरुबाट २ करोड ९४ लाख ७७ हजार ६५० कित्ताको लागि आवेदन परेको हो । जुन मागभन्दा १४ गुणा बढी हो ।
कम्पनीले लमजुङ जिल्लामा ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। प्रतिमेगावाट लागत अनुमान २० करोड ३९ लाख २५ हजार रहेको छ। कुल लगानी अनुमान ६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रहेको छ।
र्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९१ दशमलव ९९ रहेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनी रू. ८ करोड ७७ लाख ६४ हजार नोक्सानीमा रहेको छ ।
२ मेरो शेयरको साइट
४) न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको साइट